Le Nqubomgomo Yobumfihlo ilawula indlela iFyrebox Quizzes eqoqa ngayo, isebenzise, igcine futhi idalule imininingwane eqoqwe ngabasebenzisi (ngamunye, "Umsebenzisi") wewebhusayithi ye-https: //www.fyrebox.com ("Isiza"). Le nqubomgomo yobumfihlo isebenza kwiSayithi nayo yonke imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa yiFyrebox Quizzes
Imininingwane ekhonjwa nguwe
Singaqoqa imininingwane yobunikazi bethu evela kubasebenzisi ngezindlela ezahlukahlukene, kufaka phakathi, kepha kungakhawulelwa lapho, lapho Abasebenzisi bevakashela isiza sethu, babhalisa esizeni, beka i-oda, futhi behlobene neminye imisebenzi, izinsizakalo, izici noma izinsiza esizenzayo kuyatholakala esizeni sethu. Abasebenzisi bangacelwa, kufanelekile, igama, ikheli le-imeyili, imininingwane yekhadi lesikweletu. Abasebenzisi, noma kunjalo, bangavakashela iSayithi lethu ngokungaziwa. Sizoqoqa imininingwane yobunikazi eqondene nabasebenzisi kuphela uma bethula leyo mininingwane kithi ngokuzithandela. Abasebenzisi bangahlala benqabile ukunikezela ngemininingwane yokuhlonza uqobo, ngaphandle kokuthi kungabavimbela ukuthi bahlanganyele emisebenzini ethile ehlobene neSayithi.
Imininingwane engeyona eyomuntu uqobo
Singahle siqoqe imininingwane engeyona eyakho yomuntu siqu ephathelene nabasebenzisi noma nini lapho bexhumana neSayithi lethu. Imininingwane engeyona eyomuntu uqobo ingafaka igama lesiphequluli, uhlobo lwekhompyutha nolwazi lwezobuchwepheshe mayelana nokuthi Abasebenzisi basebenzisa kanjani ukuxhumana nendawo yethu, njengohlelo olusebenzayo kanye nabahlinzeki bensizakalo ye-Intanethi abalusebenzisayo neminye imininingwane efanayo.
Amakhukhi esiphequluli seWebhu
Isayithi lethu lingasebenzisa "amakhukhi" ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi. Isiphequluli sewebhu somsebenzisi sibeka amakhukhi kwi-hard drive yazo ngezinjongo zokugcina amarekhodi futhi kwesinye isikhathi ukulandelela imininingwane ngazo. Umsebenzisi angakhetha ukusetha isiphequluli sakho sewebhu ukwenqaba amakhukhi, noma ukukuqwashisa lapho kuthunyelwa amakhukhi. Uma benza njalo, qaphela ukuthi ezinye izingxenye zeSayithi zingahle zingasebenzi kahle.
Silusebenzisa kanjani ulwazi oluqoqiwe
I-Fyrebox Quizzes ingaqoqa futhi isebenzise ulwazi lomuntu siqu lwabasebenzisi ngezinjongo ezilandelayo:
Ukuze uthuthukise inkonzo yamakhasimende
Imininingwane oyinikezayo isisiza ukuphendula izicelo zakho zamakhasimende kanye nezidingo zokusekelwa kahle.
Ukwenza ngezifiso ulwazi lomsebenzisi
Singahle sisebenzise imininingwane ekuhlanganeni ukuqonda ukuthi Abasebenzisi bethu njengeqembu basebenzisa kanjani izinsiza nezinsizakalo ezinikezwe Esizeni sethu
Ukuthuthukisa isiza sethu
Singasebenzisa impendulo oyinikezayo ukwenza ngcono imikhiqizo nezinsizakalo zethu.
Singasebenzisa imininingwane Abasebenzisi abanikezayo ngabo uma befaka i-oda kuphela lokunikezela ngeselelo kuleyo oda. Asabelani ngalolu lwazi namaqembu angaphandle ngaphandle kwesilinganiso esidingekayo sokuhlinzeka ngomsebenzi.
Ukuthumela ama-imeyili ngezikhathi ezithile
Singasebenzisa ikheli le-imeyili ukuthumela imininingwane yomsebenzisi nezibuyekezo eziphathelene ne-oda labo. Ingasetshenziswa futhi ukuphendula imibuzo yabo, imibuzo kanye / noma ezinye izicelo. Uma umsebenzisi enquma ukungena ngemvume ohlwini lwethu lokuposa, azothola ama-imeyili angafaka izindaba zenkampani, izibuyekezo, imininingwane ephathelene nomkhiqizo noma yensizakalo, njll. Uma nganoma yisiphi isikhathi uMsebenzisi ethanda ukuzikhipha ohlwini lokuthola ama-imeyili ngokuzayo, sifaka imininingwane ungabhalisi imiyalo phansi kwe-imeyili ngayinye noma uMsebenzisi angaxhumana nathi ngeSayithi lethu.
Semukela ukuqoqwa kwedatha efanelekile, ukugcinwa kanye nokusebenza kwezindlela zokuphepha nezinyathelo zokuphepha ukuvikela ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukuguqulwa, ukudalulwa noma ukubhujiswa kwemininingwane yakho yangasese, igama lomsebenzisi, iphasiwedi, imininingwane yokuthengiselana kanye nemininingwane egcinwe eSayithini yethu.
Ukushintshaniswa kwedatha ebonakalayo neyizimele phakathi kweSayithi nabasebenzisi bayo kwenzeka ngaphezulu kwesiteshi sokuxhumana esiphephile se-SSL futhi sibethelwe futhi sivikelwe ngamasiginesha edijithali.
Ukwabelana ngemininingwane yakho
Asithengisi, asithengisi, noma siqashe imininingwane yobunikazi eqondene nabasebenzisi kwabanye. Singabelana ngemininingwane ejwayelekile ye-demographic demographic engaxhunyiwe kunoma imiphi imininingwane yokuhlonza yomuntu siqu ephathelene nezivakashi nabasebenzisi nabalingani bethu bebhizinisi, abathengisi abathembekile nabakhangisi ngezinhloso ezichazwe ngenhla. Singasebenzisa abahlinzeki bensiza beqembu lesithathu ukusisiza ukuqhuba ibhizinisi lethu neSayithi noma phatha imisebenzi us, efana nokuthumela izincwadi noma ucwaningo. Singabelana ngolwazi lwakho nalaba bantu besithathu ngalezi zinhloso ezikhawulelwe uma usinikeze imvume yakho.
Abasebenzisi bangathola ukukhangisa noma okunye okuqukethwe kusayithi lethu elixhumanisa neziza nezinsizakalo zabalingani bethu, abahlinzeki, abakhangisi, abaxhasi, abanikezeli belayisense kanye nabanye abantu besithathu. Asilawuli okuqukethwe noma izixhumanisi ezivela kulezi zingosi futhi azibophezeli emisebenzini esetshenziswa ngamawebhusayithi axhumene noma avela kusayithi lethu. Ngaphezu kwalokho, la masayithi noma izinsizakalo, kufaka phakathi okuqukethwe kwazo nezixhumanisi, kungenzeka kuguquke njalo. Lawa masayithi nezinsizakalo angaba nezinqubomgomo zawo zobumfihlo nezinqubomgomo zensiza yamakhasimende Ukuphequlula nokuxhumana kunoma iyiphi enye iwebhusayithi, kufaka phakathi amawebhusayithi ahlobene neSayithi lethu, kuncike kwimigomo nezinqubomgomo zaleyo webhusayithi.
AbakwaFyrebox Quizzes Ltd banokuqonda ukubuyekeza le nqubomgomo yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi. Uma sikwenza, sizobuyekeza idethi ebuyekeziwe ngezansi kwaleli khasi futhi sikuthumele i-imeyili. Sigqugquzela Abasebenzisi ukuthi bavame ukubheka leli khasi uma kukhona noma yiziphi izinguquko ukuze bahlale benolwazi lokuthi sisiza kanjani ukuvikela imininingwane yomuntu esiqoqa. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi kungumsebenzi wakho ukubuyekeza le nqubomgomo yobumfihlo ngezikhathi ezithile futhi wazi ngokushintshwa.
Ukwemukela kwakho le migomo
Ngokusebenzisa leSayithi, ukhombisa ukwamukela kwakho le nqubomgomo kanye nemigomo yokusebenza. Uma ungavumelani nale nqubomgomo, sicela ungasebenzisi iSayithi lethu. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa isiza kulandela ukuthumela izinguquko kule nqubomgomo kuzothathwa njengokwemukela kwakho lezo zinguquko.
Uma unemibuzo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, imikhuba yaleli sayithi, noma ukusebenzisana kwakho naleli sayithi, sicela uxhumane nathi ku:
I-U372/585 Little Collins St
I-SouthBANK VIC, 3006
Lo mbhalo wagcina ukuvuselelwa ngoMashi 9, 2020